Sidee kaligaa loo socdaalaa? | Fikradaha iyo tabaha safarka kaligaa. - THE INDIAN FACE
Khibrada safarka kaligaa Ku xidhnow naftaada gudaha!
Guga ayaa u dhow geeska waxaana la joogaa waqtigii la bilaabi lahaa ka fikirka qorshooyinka aan qorsheyneyno xagaaga. In kasta oo laga soo bilaabo 2020 wax kasta ay yara beddeleen (xoogaa xoogaa ah), noloshu way sii socotaa, waxaan haysannaa waqti, iyo haddii aan maskaxdeena gelino, xitaa waxaan safar ugu tagi karnaa bartamaha dhulka. Waxaa jira meelo aan la tirin karin oo sugaya in la ogaado, waxaan sii wadi karnaa inaan ogaanno adduunka oo aan si nabadgelyo ah ugu safro COVID-19. Waxaan ku noolnahay adduun dijitaal ah, halkaas oo safarrada sawirrada, shabakadaha bulshada, iyo deg-degga ay yihiin amarka maalinta.
Waxaad ka bilaabi kartaa safarka ugu dheer noloshaada oo waxaad ku dambeyn kartaa inaad u rogo safar bartamaha Dunida, taas oo kuwa aan kula joogin ay ku raaxeysan doonaan khibradaada. Marka, haddii aad ka fikireyso inaad bilowdo tacabir xagaagan, oo aadan weli hubin waxa la sameynayo, waxaan hoos ku soo bandhigeynaa dhowr beddelaad oo ku saabsan qorshooyinka safarka ee raqiiska ah, safarada dhammaadka sanadka ee suurtagalka ah, fikradaha loogu talagalay boorsooyinka adduunka oo dhan doonaya ka bax aaggaaga raaxada, iyo meelaha aad ka heli karto oo kaa caawin kara haddii aad raadineyso inaad keligaa safarto oo aad waqti yar naftaada ugu baahato.
Weligaa ma isweydiisay sida ay tahay kalidaa safarka? Tusaale ahaan, "Cun, Tuko, Jacayl" Julia Roberts waxay kubilaabaysaa safarkeedii kaligeed markay keli ku noqoto markay nafteeda ku waydo nolol ay dareento inaysan ka sii mid ahayn. Guurkeedu ma shaqeynayo, farxad kuma heli karto howlaheeda caadiga ah, waxayna dareemeysaa inay ku hafan tahay magaalo weyn. Wuxuu sameeyaa go'aanka habeenki si uu kaligiis ugu aado Talyaaniga, Hindiya iyo ugu dambeyntiina Indooniisiya. Sannadkan oo aan ahayn reer-guuraa, ayay is aragtaa oo waxay ogaataa waxa runta muhiimka ah.
Dhiniciisa, buugga "Safarka Xarunta Dunida" ee uu qoray Jules Verne, oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga macdanta, wiil uu abti u yahay iyo hage la yiraahdo Hans, waxay u baxeen Safar ay ku tagayaan Xarunta Dunida. Maxaa ku bilaabmaya sidii safar keli ah oo aan rajo badan laga qabin, kaas oo ku dhashay ka dhalashada kala-goynta waxyaabaha ku jira waraaqdii hore, waxay ku dambaynaysaa inay noqoto hal-abuurkii ugu weynaa ee saddexdaas jilaa waligood malayn karaan.
Socdaalka kaligaa, ama shirkada saxda ah, waxay noqonkartaa khibrada nolosheena ugu taajirsan iyo lama iloobaankaba. Waxay naga dhigeysaa mid madaxbanaan, xor ah waxayna naga caawineysaa inaan qaan gaarno oo aan u korno siyaabo badan. Mararka qaarkood waxaan u baahanahay inaan ka baxno waxyaabaha qaarkood, sida joogtada ah iyo mashquulka maalin kasta, iyo inaan helno cidda aan dhab ahaan nahay, si aan u fahanno in noolasha ay noqon karto tacabur weyn haddii aan baranno inaan dareemo nolol.
FAA’IIDOOYINKA KELIYA socdaalka
Independencia: Sidaan soo sheegnay safarka kaligaa wuxuu ku siinayaa madaxbanaani. Uma baahnid qof inuu ku weheliyo safarkaas aad in badan ku riyootid. Haddii aad leedahay qof boorsada ku xiran oo qofka aad la soconaysid uusan lahayn rabitaan lamid ah adiga, maxaad u joogaysaa gurigaaga adigoo ka sugaya qof lagu dhiirrigeliyo inuu ku raaco? Noqo milkiilaha khibradaada!
Dhaqaalaha: Haddii aad go'aansato inaad kaligaa safarto waxaa hubaal ah inaad sameyn doontid safarro jaban. Ama ugu yaraan, aad uga jaban marka aad la safreyso qoyskaaga ama asxaabtaada. Adiga ayaa isku abaabulaya safarka aad runti rabto inaad sameyso, waxaad ka dhigi doontaa cuntadaada meesha aad rabto inta ugu badan iyo meesha aad dhab ahaantii awoodi karto iyo, marka lagu daro, waxaad xakameyn doontaa dhaqaalahaaga adigoon ka fikirin tan kuwa kale.
La kulan dad cusub: safarka kaligaa wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la fal gasho shisheeyaha. Haddii waqti kasta oo safarkaaga ah aad dareento xoogaa cidlo ah, ama aad rabto inaad la hadasho boorsada dhabarka ama maxalliga ah ee deegaanka aad joogto, waad sameyn kartaa sidaas si aad u dhaafsato macluumaadka iyo sheekooyinka, iyada oo aan waajib kugu ahayn inaad isaga ama iyada la joogto inta kale ee waqtigaaga ah.
La xiriirida dhaqamada cusub: Waad baran kartaa dhaqanka waddanka ama magaalada aad kaligaa u soo safartay, laakiin kaliya maahan qeybta dalxiiska, laakiin sidoo kale qeybta dhabta ah iyo kuwa asaliga ah. Haddii aad ka daashay safarada sawir qaadista ah, oo ujeeddada lagu soo koobay booqashooyinka taalladaha, matxafyada ama fagaarayaasha astaamaha iyo hortooda la dhigayo, taas bedelkeedana waxaad doorbideysaa inaad ku dhex milmato dhaqanka dhabta ah ee meesha aad joogto, safarka keligiis waa hubaal inay ku siiso geesinimo inaad ku tagto meelaha ay u tageen dhowr dalxiisayaal raxan raxan u raaca, oo markaa ku noolaada khibrad dhab ah.
Had iyo jeer xusuusnow ka hor intaadan quusin naftaada, inay muhiim tahay inaad ka fikirto nooca safarka aad rabto inaad sameyso; haddii aad tahay ama aad rabto inaad noqoto boorsada safarka oo aad booqato meelo badan oo adduunka ah, ama haddii aad doorbideyso inaad naftaada u hurto ogaanshaha isla meeshaas si qoto dheer dhowr toddobaad oo aanad beddelin halkaad u socoto. Sidoo kale, had iyo jeer maskaxda ku hay haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ku qaadato safar sawir leh dhibco leh aragtiyo cajaa'ib leh, haddii aad doorbido wax badan oo ka mid ah xiisaha iyo isboortiga, haddii aad damacsan tahay inaad safar dhaqameed aad qaadatid ama haddii, si ka duwan, aad u tixgeliso naftaada a socdaal. foodie waxaadna ku talajirtaa inaad sameyso booqasho gastronomic ah meelkasta oo aad tagtid.
FIKRADAHA KALIYA EE LAGU SOO TAGO
Wax kastoo ah astaantaada iyo ujeedooyinkaaga markaad safreyso, waxaan kaliya kaaga tagi doonnaa fikradaha safarka ee aad ku qaban karto hadba waxa aad rabto inta badan:
Ku safridda tareenka waxay noqon kartaa mid ka mid ah raaxada dalxiis ee ugu weyn ee qofka socotada ahi la kulmi karo. Qiyaas dhamaan faa iidooyinka safarka tareenka ... inaad fadhiisato daaqada dhinaceeda, adigoo wax aqrinaya, dhageysanaya muusikada, ama aad si fudud uga fikireysid dhammaan waxyaabahaas oo aadan waligaa ka fikiri doonin marka ay dadku kugu xeeran yihiin, adoo kor u eegaya una fiirsanaya muuqaalka meel fog, adiga oo siinaya boos oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato, ama aad si fudud indhaha u qabato oo aad naso dhawaaqa giraangiraha oo lulmanaya biraha.
Waxaan ognahay in qorsheynta safar dibedda ah oo tareen ah, sida Interrail-ka caanka ah, ee loogu talagalay safarka safarada, ay noqon karto mid cakiran oo jilicsan mustaqbalka, si kastaba ha noqotee, waxaan kuu soo bandhigeynaa wadooyin aad sameyn karto adigoon ka tagin Spain, oo laga yaabo inay wali sameeyaan ma ogi:
Transcantábrico: Waxay u badan tahay inuu yahay tareenka dalxiis ee Isbaanishka ah heer sare. Ku dalxi "Green Spain", taasi waa, waqooyiga dalka. Waxaad awoodi doontaa inaad ku qoydo dhulkeeda quruxda badan iyo muuqaalka badan tareenka ilaaliya jacaylka waddooyinka waaweyn ee horaantii qarnigii XNUMXaad, laakiin leh raaxada hadda jirta. Haddii aad leedahay qof dhabarka boorsada ku haysta, kama siibi doontid kamaraddaada maxaa yeelay waxaad jeceshahay inaad dukumiinti ka dhigto ilbiriqsi kasta, marka lagu daro, waxaad jeceshahay gastronomy wanaagsan, doorashadan ayaa adiga kuu fiican. Tani waxaad ka dhigi doontaa safarkaaga sawir ee ugu habboon, waxaadna awoodi doontaa inaad ku raaxeysato cuntada dhaqameed ee Basque Country, Galicia, iyo Castilla y León.
Al Andalus: Haddii aad doorato inaad fuusho tareenkan, waxaad safar ku mari doontaa Andalusia muddo 7 maalmood ah, adiga oo ka amba baxaya Seville. Waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato caasimadda Andalusia, Cathedral, Real Alcázar iyo Archive of Indies oo lagu dhawaaqay Goobta Dhaxalka Adduunka, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad ku raaxeysato cuntada caadiga ah ee bulshadaan oo aad barato magaalooyinka sida Cádiz , Ronda, Córdoba, edabeda ama Baeza oo qoto dheer. Iyo taallo sida La Alhambra ah. Haddii aad horey u taqaanay Andalusia, waxaa sidoo kale jira jidad aada Lisbon iyo Porto, oo joogsi ku leh Mérida, jirkii hore "Emerita Augusta" oo leh mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan uguna ballaadhan ee qadiimiga ah ee Isbaanishka, sidoo kale wuxuu ku dhawaaqay Goobta Dhaxalka Adduunka.
Tren del Xajka: Haddii aad rabto inaad sameyso dariiqa caanka ah ee Camino de Santiago, laakiin ha u tixgelin naftaada dhab ahaan boorsada dhabarka, waxaad raaci kartaa tareenka xajka, kaasoo kuu safri doona qaybaha wadada adiga oo ku raaxeysanaya aragtidiisa.
Haddii aad doorbideyso inaad sii joogtid Spain oo aad aado safar isboorti ama safar, hal ka mid ah labadan ikhtiyaar ayaa hubaal si fiican kuugu habboonayn doona:
FuerteventuraJasiiraddan, qofku waa inaanu weligiis keligiis tegin, laakiin uu weheliyo sabbood wanaagsan iyo qalab socod oo dhammaystiran. Jasiiraddan asalka ah folkaanaha waa Mecca loogu talagalay badmaaxayaal badan, heerkulku waa mid wacan sanadka oo dhan dabayshana waxay abuurtaa hirar aan caadi ahayn.
Pyrenees: Kooxda Gruppit waxay abaabulaan safaro ay ku tagayaan Pyrenees oo loogu talagalay dadka doonaya inay sameeyaan isboorti buuro dhaadheer muddo 4 maalmood ah. Kooxdani waxay wax ka siisaa waddooyinka kabaha barafka, socodka ama socdaallada hagida loogu talagalay dadka kaligood safraya.
Wakaaladaha sida "1 nolosha 2 safarka" waxay u heellan yihiin abaabulka safarka noocan ah, taasoo u suurta gelineysa dadka safraya inay si aad u kala duwan u bartaan waddamada iyo dhaqamada kale, iyagoo siinaya khibrad safar ah. Hay'ad kale oo u heellan safarka tacaburka ayaa ah "3000KM. Safarku wuxuu la jaan qaadayaa kooxda, si ka duwan wakaaladihii caadiga ahaa, ee kooxdu la qabsanaysay safarka loo qorsheeyay. Sidan oo kale, waxaa suurtagal ah in lagu kala beddelo laxanka safarka baahiyaha socotada oo lagu raaxeysto safar dhab ah.
In kasta oo aanaan had iyo jeer dooneynin inaan ka tagno dalalkeenna oo aan u safrayno adduunka, waxaa jiri doona waqtiyo aan si fudud oo raaxo leh ugu safri karno. Waqtiyadaas, waxaan horeyba u dooran karnaa safarada Amsterdam tusaale ahaan, taas oo inkasta oo ay u muuqato mid muuqata oo caadi u ah dhamaadka sanadka socdaalku, tani waa meel ku habboon safarleyda dalkooda ee jecel meelaha cagaaran, baaskiil wata oo nolol deggan. Magaalada Amsterdam waxaad ku neefsaneysaa xasilooni, maalmaha qoraxdu waa kufiican tahay inaad ku fariisato kanaallada ama mid ka mid ah jardiinooyin badan oo aagga ku yaal oo aad ugu raaxeysatid muusikada, dadka iyo dareenka jawiga wanaagsan ee magaalada ka jira. Iyo maxaa diidaya, maadaama aan ku riyoonayno inaan dibadda u safri karno, ka fikir inaad tagto Krabi, Thailand, oo ah mid ka mid ah meelaha ugu badan ee lagula taliyo socotada keli ah. Waxay leedahay xeebo paradisiacal ah, biyo hufan, cimilo wanaagsan ... Waxaad kubilaabi kartaa safarada doonta, doon iyo sidoo kale waxaad ka fogaan doontaa buuqa magaalada. Shaki la'aan waxaad ku noolaan doontaa dhaqdhaqaaq qunyar socod ah oo waxaad fursad u heli doontaa inaad kula xiriirto "naftaada" gudaha.
TALOOYIN KU SAABSAN QAAB-U-QABASHADA KOOXDAADA SOLITAIRE
Abaabulka safarkaaga keligiis waxay ku lug yeelan kartaa xoogaa diyaarin ka badan haddii aad raacdo dad badan. Waxaad qorsheyneysaa taariikhaha, goobta loo socdo, hoyga iyo waddooyinka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dalabyo badan oo ka socda hay'ado u heellan abaabulka safarrada dadka keligood taga. Waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso hay'adaha sida "viajessolo.com", "Yporquenosolo" ama hay'ado la mid ah oo u heellan inay abaabulaan safarro raqiis ah nooc kasta oo loogu talagalay dadka kaligood safraya oo doonaya inay si ammaan ah u sameeyaan, ama xitaa la kulmaan dad cusub jidka ku jira. Wax wanaagsan oo ku saabsan noocan wakaaladda ayaa ah inay leeyihiin tallaabooyin u dhigma oo ay si nabadgelyo ah ugu safraan COVID-19, oo la cusbooneysiiyey lana heli karo. Haddii aad u safreyso kaligaa, waxaan kugula talineynaa inaad maskaxda ku hayso qodobbadan macluumaadka ah:
Caqli gal: Hore u sii ogow meesha aad aadeyso. Isku day inaad dejiso khariidad maskaxeed oo ku saabsan qaab dhismeedka magaalada aad u safreyso, iyo sidoo kale meelaha ugu halista badan ee goobta aad booqaneyso.
Ha aaminin: Waxaa muhiim ah in aad daryeesho alaabtaada haddii aad degan tahay qol wadaag ah oo aadan cidna aqoon. Had iyo jeer ku sii wad padlock ama furaha marinka shandadaada iskuna day inaadan kaa lumin.
Ka taxaddar: Nuqul ka sameyso dukumiintiyadaada shaqsiyeed (baasaboor, aqoonsi ...) kuna soo dir emailkaaga.
Iftiinka safarka: Isku day inaad qaadatid waxa kaliya ee lagama maarmaanka u ah si aadan u qaadin culeys xad dhaaf ah inta lagu jiro safaradaada oo aad uga tagto meel xusuus ah. Hadana, hadaadan rabin inaad alaabadaada qaadatid inta lagu jiro jidadkaaga ama socdaalada maalinlaha ah, raadi shirkadaha masuulka ka ah inay alaabadaada ka wareejiso guri kale.
Sii joogi karo: U sheeg qoyskaaga ama asxaabtaada wadada saxda ah ee safarkaagu noqon doono, muddada uu socon doono iyo meelaha aad noqon doontid, si ay kuu heli karaan haddii aad u baahato.
SUUGAANTA XIISAHA ​​BADAN IN AAD SOO SOCOTO
Haddii aad ka fekereyso noocyo madadaalo ah oo aad qaadato markii aad keli safreyso, hubaal buugaagtaan xiisaha lihi waxay noqon karaan kuwa aad jeceshahay:
Dhanka Duurjoogta (Jon Krakauer): Sannadkii 1992, Chris McCandless, oo afar iyo labaatan jir ah, ayaa waddanka galay, oo keliya waddamada Alaska. Wuxuu bixiyay lacagtiisii ​​oo dhan wuxuuna ka tagay gaarigiisa, wuxuuna ku riyooday nolol duurjoogta ah. Afar bilood kadib, ugaarsatadu waxay heleen meydkeeda oo aan naf lahayn. Sheekadiisu waxay diiradda saartay muranka; dadka qaar, wuxuu ahaa hal-abuur aan baqdin lahayn; dadka kale, waa nin waalan oo aan caqli lahayn aqoonta ugu yar ee dabeecada. Kahor intaan la waayin, Chris McCandless wuxuu u qoray saaxiibkiis: “Ha dhigin xididdada, ha dagin. Badal meelaha beddel, u horseed nolosha reer guuraaga ... Uma baahnid inaad qof kula joogto si iftiin cusub ugu soo qaado noloshaada. Waa iska banaantahay.
Safarka Xarunta Dunida (Jules Verne): Professor Lidenbrock wuxuu duugay warqad duug ah oo macno siinaysa calaamadaha aan la fahmi karin ee ay ku jirto. Qoritaanka qoraalkaas ayaa si lama huraan ah u jiidi doonta borofisar, ina adeerkiis Axel iyo ugaarsade Hans Bjelke bartamaha Dunida, oo ay ku noolyihiin xayawaanaadkii hore, duufaannada iyo khataraha kale.
Qorax buuxda (Patricia Highsmith): Tom Ripley shaki la'aan waa mid ka mid ah jilayaasha ugu xiisaha badan taariikhda sheeko-baarista. Caqli, dhaqan, iyo aftahanimo, wuxuu adeegsadaa been, xatooyo, iyo mararka qaarkood dil si uu u gaaro ujeedooyinkiisa. Riwaayaddan waxaan ku arkeynaa sida dabeecaddu u dhiseyso nolol khiyaali ah isaga oo iska dhigaya Dickie Greenleaf, oo ah nin taajir ah oo dumar ah oo uu dilo.
Dareenka safarka: Xusuus-qorrada oo shandadaada garabkaaga ku jirta si aad ugu baraarujiso xiisahaaga "aniga" (Lonely Planet): Buuggan ujeeddadiisu waa inuu ku siiyo kalsooni iyo nabadgelyo aad u baahan tahay si ay kuugu dhiirrigeliso inaad iibsato tigidh hal dhinac ah. Buuggan waxaa qoray khubaro safar ah, buugani wuxuu ku siin doonaa tilmaamo aad ku waayi karto cabsida aad keli ku safri karto.
Siraha iyo tabaha khabiirada -Tafarka iyo Hal-abuurka- (Lonely Planet): Kani waa hage buuxa oo sawirro ah, halkaas oo aad ka heli karto xeelado aad ku heli karto safarro jaban, ammaan ah oo raaxo leh.
Miyaa lagugu dhiirigaliyay inaad dhahdo "haa" safarka kaliya ee aad rabtay inaad sameyso, ugu yaraan hal mar noloshaada? Waxay noogu muuqataa qorshe weyn! Xaqiiqdii, wareysiga lala yeeshay haweeney safar ah oo dunida kaliya ku safreysa, laguna magacaabo "Master Wanderlust" waxaan ku iftiimineynaa jawaabta su'aasha ah: Maxaad u dhihi laheyd dadkaas aan ku dhiiranin inay kaligood safraan? - "Way sameeyaan. Hadday cabsadaanna, cabsi ha ku sameeyeen. Taasi way ku dhiirranayaan. In dunidu aad u weyn tahay oo qurux badan tahay in laga arko sariirta. May noolaadaan ”.
Marka, haddii aad ka daashay safarada ciriiriga ah, waxaad u baahan tahay inaad ka baxsato culeyska magaalada oo aad rabto inaad ka baxsato safarada caadiga ah ee dadka ka buuxa, ka soo dhejinta shabakadaha, waxaan kugula talineynaa inaad badbaadiso naftaada boorsadaada oo aad naftaada ku dhiirrigeliso inaad qaadato safarka kaligaa. Go'aanka gaadho, qaado taxaddarrada lagama maarmaanka ah, oo naftaada u quudho naftaada, u dhow gurigaaga ama adduunka oo dhan, oo soo hel meelo qarsoon oo aan la barbardhigi karin, xitaa haddii kuwa ugu fiican ay si qoto dheer kuugu dhex qarsoon yihiin. U kac iyada ... oo waxba yaanay kaa hor istaagin!
Faallooyinka ayaa la oggolaan doonaa ka hor intaanan la soo bandhigin.
Kani waa barafka ku yaal Colorado! Isbarbardhiga saldhigyadaada ugufiican
Waxaan horeyba ugu faraxsanahay xilliga barafka inuu yimaado! Iyo, markaan ka fikirno Colorado, barafku waa waxa ugu horreeya ee maskaxdeenna ka gudba ... Suuragal maaha inaadan mid la wadaagin
Windsurf iyo Kitesurf gudaha Tarifa Ha lagaa qaado caasimada dabaysha!
Mid ka mid ah baraha ugu fiican ee dabaysha iyo kitesurfing shaki la'aan Tarifa, oo ku taal gobolka Cádiz Laguma yaqaan wax caasimad u ah dabaysha! Diyaar ma u tahay in lagaa qaado
Soo hel Hoi An, magaalada ugu quruxda badan Vietnam!
Haddii aadan booqan Hoi An, waa waqtigi aad ku samayn lahayd! Magaalo xeebeed astaan ​​u ah Vietnam laguna aqoonsaday quruxdeeda, taariikhdeeda, dhaqankeeda iyo dhaqankeeda. Waxay ku taal bartamaha Ho Ch
Tilmaame weyn oo loogu talagalay meelaha lagu ciyaaro ee Isbaanishka Baro jardiinooyinka ugu fiican!
Skateboarding waa edbinta sii kordheysa ee Isbaanishka, iyo koritaanka dhismayaasha baarkinka ee skaters sii kordheysa sii kordheysa oo kaliya. Waxaan kuu sheegeynaa hoosta
Baro 7 wadiiqooyinka waaweyn ee baaskiil wadista si loogu socdo baaskiil wadista!
Dalxiiska wareegga ayaa noqday mid ka mid ah howlaha ugu qabow xagaagan! Hawl firfircoon oo isku dhafan sida ugu wanaagsan ee baaskiil wadashada madadaalada iyo dalxiiska xiisaha leh. Ma tahay gra
12 xiisaha gobolka polar ka Antarctica
Dusha sare ee wanaagsan iyo xaaladaha cimilada adag ayaa Antarctica ka dhigay mid ka mid ah gobollada polarTani waa mid aan loo dulqaadan karin dhulka, laakiin sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu badan ee is-dhexgalka ah